Kibera: Lesona Iray Hakàna Tahaka · Global Voices teny Malagasy
MpanoratraRV at Kibera
Voadika ny 09 Jona 2018 18:41 GMT
Vakio amin'ny teny Italiano, Português, Español, Français, Ελληνικά, English
(Fanamarihana: lahatsoratra anglisy nivoaka tamin'ny Aogositra 2012)
Ity lahatsoratra ity dia ampahany amin'ny andiany iray amin’ireo tatitra avy amin'ny fiarahan'ny Global Voices miasa miaraka amin'ny Map Kibera sy Map Mathare izay natao nandritra ny Fihaonambe nataon'ny Global Voices tany Nairobi tamin'ny volana Jolay 2012.
Tantara sy sary avy amin'i: Laura Schneider
Ao anatin'ireo faritra sasantsasany eto amin'izao tontolo izao, matetika misy fomba fitsara ivelany mikasika ny fitsidihana an'ireo faritra mahantra any amin'ireo tanàndehibe, tahaka ireo “favelas” ao Brazila na “Villas Miserias” ao Arzantina. Ireo sasantsasany mihevitra fa ny fitsidihana atao any amin'ireo toerana ireo dia mety hitera-doza ho azy ireo noho ny halatra, fanolanana ary òety hatramin'ny famonoana aza. Toa izay matetika no tranga hita amin'ireo mpitsidika izay milaza an'ireo toerana tsidihany mialoha ao Kibera any Nairobia, any Kenia, hoe tsy azo antoka intsony any izao. Fa taorian'ny fanadihadiana lalina mikasika an'i Kibera sy ny Map Kibera Project, ny famintinana azo tsoahana dia ny fisian'ireo fiheverena efa nipetraka mialoha mikasika an'ireo trano tsizarizary ireo.
Kibera – fijery iray
Nizarazara ho andiany samihafa ny tariky ny Global Voices mba hanaovana an'ireo fikarohana, fanadihadiana ary, taoriana kely, mba hanazava izay hitanay tany Kibera. Ny “andiany na aiza na aiza”, araka ny niantsoanay azy, dia nikatsaka ny hivenjuvenjy teny amin'ny manodidina ireo trano tsizarizary, sy hifanerasera amin'ireo mponina sy mba ho afaka mandrakitra tahirin-kevitra mikasika izay hitanay.
Fidirana ao Kibera
Eddie, iray amin'ireo mpikambana amin'ny tetikasa Map Kibera no nitondra anay teny amin'ny manodidina, indraindray miteny aminay izy òilaaza izay oerana azonay ampiasàna ny fakantsarinay sy izay tsy tokony hanaovana izany. Nanome fanazavàna ihany koa izy mikasika ny toerana tsirairay izay tsidihanay, ary koa nanolotra anay tamin'ireo tetikasa ho an'ny tanora misy ao Kibera.
.Fandehandehanana manodidina an'i Kibera
Taorian'ny ny fotoana vitsy nandehandehanana teny amin'ny manodidina nandritra , nijanona tao ERIK Enhancing Revitalization tao Kibera izahay, fikambanana iray tsy mampidi-bola izay manoòe hery ny zatovo amin'ny fanaovana fanatanjahantena ary fanolorana tolotra tony fanoroana hevitra. Asa iray hafa koa tena manandanja, mampianatra an'ireo tanora ny fomba atao hanodinana indray ireo fako, izay saika hita miparitaka manoididina ireo trano tsizarizary.
Fako manodidina ny lalamby
Fanodinana fako ao Kibera
Manoritsoritra ny asan'i ERIK ny pejy Taking It Global:
Mba hampiroboroboana ny fiainana ara-pahasalamana eny anivon'ireo tanora ao Kenia ka hamolavolàna avy amin'izy ireo ny olom-pirenena manerantany mba ho lasa mpitarika tonga saina amin'ireo sehatra rehetra eo amin'ny fiainana, atosiky ny faniriana hamolavola ny tontolo ho toerana iray tsaratsara kokoa ho an'ny tanora na aiza na aiza misy azy eto an-tany.
Fanamafisana ny Fanomezana hery vao ao Kibera (ERIK)
Ary mitohy ny pejy:
Mijaly noho ny fahasimban'ny tontolo iainana ambony loatra vokatry ny fitomboan'ny mponina be loatra i Kibera. Ao ny tsy fahampian'ny fananganana ireo toerana ara-pahasalamana toy ireo toeram-pivoahana, paompy sy toerana fanariana fako. Ny fampiasan'ireo mponina ny “toeram-pivoahana manidintsidina” (fampiasana harona plastika hanaovana maloto ary apetraka eny an-dalana avy eo) dia mitondra loza ho an'ny fahasalaman'ireo mponina any amin'ireo trano tsizarizary. Mitarika loto maharitra ireo fomba fiainana ireo ary mahatonga ny fiainana ho tsy mampahazo aina ho an'ny tanora sy ny vondrom-piarahamonina amin'ny ankapobeny mihitsy.
Amin'ny maha-tanora anay, ilainay ny mandray fanapahankevitra izay mampiroborobo ny tontolo iainana madio ho anay sy ny vondrom-piarahamonina manodidina anay. Mahatsapa izahay fa ilaina io satria:
• Amin'ny alalan'ny fanadiovana sy fitandroana ny tontolo iainana, afaka hiasa ho an'ny vondrom-piarahamonina amin'ny ankapobeny isika.
Misy vitsivitsy ireo Fikambanana Miorina ao anaty Vondrom-piarahamonina izay manao ezaka na manao fanovàna miroso mankamin'ny fahadiovan'ny tontolo iainana ao Kibera, ka tena ilaina tokoa ny fidirana an-tsehatr'ireo tanora .
” Taorian'ny fandehandehanana manodidina sy nahitàna an'ireo tsikitsiky mahafinaritra marobe avy amin'ireo ankizy, tetikasa mahaliana marobe sahala amin'io voalaza etsy ambony io no nahaizanay zavatra: “aza mitsaratsara an'ireo trano tsizarizary”. Afaka naka lesona vitsivitsy izahay ary namokatra avy amin'ireo ihany koa. Voka-dratsy azo avy amin'ny governemanta ireo trano tsizarizary ireo izay natao ankilabao sy tsy nanao an'ireo filàna fototra ho laharam-pahamehana ho an'ny firenena manontolo.
Kids at Kibera ……………Ireo ankizy ao Kibera